Ny "fijery" ny valin'ny fikarohana fampiharana dia havaozina | Androidsis
Google hanaraka manavao ny toerana rehetra sy ny Android Amin'ny fiezahany hamadika ity rafitra miasa ho an'ny finday ity ho lasa traikefa an-tsary rehefa mandany fotoana ao amin'ny Play Store ny mpampiasa dia manitatra ny takelaka fampandrenesana ao amin'ny Android 5.1 na koa manindry ny bokotra virtoaly ho an'ireo fampiharana vao nosokafana. Lollipop dia nanompo betsaka momba an'io ary mazava tsara Marshmallow dia hitohy ity fanatsarana lehibe amin'ny estetika sy interface ity.
ankehitriny manasongadina ny loko eo amin'ny interface ny valin'ny karoka fampiharana rehefa vita avy amin'ny Google Now miaraka amin'ny teny hoe "apps" miaraka amin'ny fikarohana. Hikaroka "apps fakan-tsary" ary mozika misy rindrambaiko samy hafa loko no hiseho eo alohanay raha ampitahaina amin'ny taloha ary misy valiny mavesatra kokoa eo amin'ny lafiny fahitana. Ireto ambany ireto dia azonao jerena ny horonantsary an'ity endri-tsoratra voaverina ity izay mandeha amin'ny sary rehetra.
1 Ny lafiny fahitana tsara indrindra ambonin'ny rehetra
2 Amin'izao fotoana izao amin'ny Android ihany
Ny lafiny fahitana tsara indrindra ambonin'ny rehetra
Avy amin'ny bara fitadiavana izay azon'ny olona rehetra eo amin'ny biraonao finday Android, azony atao ny manoratra "app fakantsary". Vita izany ary hiseho eo anoloantsika mozika feno amin'ny rindrambaiko misy ny lokony samihafa araka ny an'ny fampiharana asehony. Tsindrio ny bokotra fanitarana ary misimisy kokoa ny fampiharana miseho miaraka amin'ny sarimiaina marina izay mamadika ny fitetezana sy fikarohana ho zavatra mahafinaritra tokoa amin'ny fahitana.
Ireo valim-pikarohana ireo koa ampidiro ny fampahalalana mitovy toy ny isa sy naoty azony, isa marobe voaray ary na maimaim-poana izany na aloa. Fomba fijery iray tena niova tokoa raha ampitahaintsika amin'ny an'ny fampiharana fikarohana Google mihitsy ao amin'ny iOS, izay somary maloto amin'ity fomba fampisehoana ireo fampiharana ity, araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambany.
Amin'izao fotoana izao amin'ny Android ihany
Tsy hahagaga antsika koa izany fa ity lafiny hita maso ity dia amin'ny Android ihany izao. Ao amin'ny iOS dia mila miandry kely ianao satria amin'izao fotoana izao tsy fantatsika raha toa ka tsy misy fiainana sy loko ny lisitry ny fampiharana, izay samy mampifandray ilay rindranasa, dia ho tonga amin'ny fotoana sasany ho an'ireo mpampiasa an'ity rafitra fiasa malaza ity ho an'ny finday. fitaovana ho an'ny telefaona Apple.
Ity endri-javatra ity dia aparitaka ankehitriny, noho izany afaka mamakivaky ny bara fitadiavana ianao avy amin'ny telefaona anao hizaha toetra azy. Amin'ny ahy dia efa miseho izy ireo rehefa manao fikarohana ianao ary ny marina dia tsara izany.
Ho an'ny ambiny, fironana amin'ny sary izay manjaka hatrany toa iray amin'ireo torolàlana lehibe indrindra an'ny Google ho an'ny Android ary azo antoka fa tsy ho eto izany, satria io no iray amin'ireo tanjona lehibe nandritra ny taona vitsivitsy. Ampiasaina ny fiasa vaovao, fa miaraka amina hatsaran-tarehy hita maso tsara kokoa, Android Lollipop no tena toerana nametrahan'ny Google izany.
Ny antsipiriany rehetra avy amin'i Google na dia tsy manampy aza tsy misy fiasa vaovao na amin'ny endri-javatra, manolotra fahatsapana hafa ho antsika izy rehefa mikaroka fampiharana amin'ny alàlan'ny Google Now na ny widget fikarohana Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google dia manome "fijery" vaovao ho an'ny interface ny valin'ny fikarohana an'ny apps
Twitter izao dia mamela anao hametraka bitsika amin'ny mombamomba anao amin'ny Android sy iOS